Ukuthandana nenombolo yocingo
Kuqala kuphi ukuphola? Yebo, yebo, ngenombolo yocingo. Futhi bewazi ukuthi ngendlela indoda yakho idonsela ngayo inombolo yakho yocingo uma uhlangana, unganquma umlingiswa wakhe nokuthi ubuhlobo bakho buzohlala isikhathi eside kangakanani. Esihlokweni sethu sokuthandana nenombolo yocingo, sizokutshela indlela yokunquma ukuthi yiyiphi fan yakho.
1. Uma umuntu ebhala inombolo yakho ephepheni, lo muntu akakwazi ukuhlala ubude obude. Phela, leli qabunga lilula kakhulu ukulahlekelwa, okusho ukuthi awunandaba naye, futhi kukhona amantombazane amaningi anjengawe.
Hlangana nentombazane ngenombolo yocingo
2. Uma umuntu owaziyo ebhala phansi inombolo yakho yefoni kudayari, lo muntu uzobe engathí sina. Futhi umuntu onjalo ukhona futhi ufuna ubuhlobo obude. Uhlale ekwazi ukuthi yini ayifunayo nomzuzu ngamunye unayo iwashi lakhe. Indoda enjalo iyoba ngumndeni omuhle, kodwa, ngeshwa, iyabuhlungu impilo.
3. Uma umuntu ebhala inombolo yocingo esandleni sakhe, kubonakala sengathi kuhle. Emva kwakho konke, abantu basebenzise lokhu phansi, uma kukhona okubalulekile okufanele kukhunjulwe. Kodwa ngemuva kokuba wonke irekhodi elinjalo lingakwazi futhi liphulwe ngengozi, ngakho-ke, uzokukhohlwa. Emadodeni anjalo, ukushisa okusheshayo kuqhuma kanjani, njengoba nje kuphuma ngokushesha.
Ukukhangisa - isithombe, inombolo yocingo yamantombazane
4. Uma ubona ukuthi indoda yakho izama ukubhala phansi inombolo yakho yonke indawo efonini nasencwadini yezincwadi lapho kunokwenzeka khona, wena-ke, uyayithanda. Unquma ukuthi uyayithanda kakhulu, ukuthi uyakhathazeka kakhulu, uNkulunkulu akavumelani nokulahlekelwa inombolo yakho, kodwa akunjalo. Ngokuyinhloko, la madoda aphephile kakhulu futhi, cishe, amadodana omama. Amadoda anjalo adinga ukukhumbuzwa njalo ngalokho okudingeka kwenziwe futhi ngaleyo ndlela kuyoba yonke indawo ifinyelele efonini yakho. Futhi isikhathi eside uzocabangela ukuthi ungakubiza kanjani. Uma uyintombazane enamandla futhi uthanda owesilisa okhukhumezekile, khona-ke uzokulandela.
5. Kukhona amadoda aqoshe ngokucophelela uma ujwayele inombolo yakho yocingo kanye ne-notepad nefoni. Kodwa ngesikhathi esifanayo uzohlale ebonisa ukuthi unayo ifoni yesimo samuva, futhi i-notebook yenziwe isikhumba sangempela. Abantu abanjalo bakholelwa ukuthi baqonda zonke izinkinga futhi bafundisa njalo umuntu ukuthi angaphila kanjani. Kunzima kakhulu ukuhlala nabantu abanjalo. Kodwa uma umkhuthaza kuyo yonke indawo, ungakwazi, uma ekhona imali, uphume ezweni eliphakeme. Futhi-ke kulo mjikelezo owodwa uzitholele indoda ehloniphekile.
6. Kukhona nesigaba samadoda athi bayakhumbula inombolo yakho yefoni. Lapha ungadweba iziphetho ezimbili. Uma ekubizeni futhi engakhohlwa ngawe, wambheka ngempela. Kodwa, futhi uma ungakabizi, awudingi nhlobo, futhi akudingeki ukhathazeke ngakho.
Manje ungafunda umuntu omaziyo wokuqala ukuthi ubhala kanjani inombolo yakho yefoni.
Yini ebaluleke kakhulu kubambisene, isazi sezengqondo
Ingane yesibili emndenini: indlela yokulungisa umdala?
Ngidinga ukuthethelela ukuthukwa komuntu othandekayo?
Ungafunda kanjani ukusebenzisa imali ngokuhlakanipha?
Izimo ezinzima nokuthi ungabhekana kanjani nazo?
UJulia Parshuta noDmitry Dibrov babhekene nesimo sezulu saseSochi
Uhlobo lomuntu - owesifazane fatale
Indlela yokuqoqa ubuso bakho nezinkezo
Yini okudingeka udle ngemuva kuka-35: le mikhiqizo engu-10 izophuza ukuguga!
Ungasiza kanjani izinwele ezomile nezimele?
Ukushayela nge-chocolate filling kanye ne-marshmallow ukugcwalisa
Amafutha aneoli eluhlaza
Izinkondlo ngothisha abahle futhi othinta izinyembezi
Umlingo ongavamile wesikhathi: iwashi letheksthi lika-2016